Amagumbi eMandić - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguZvjezdana
Indawo yethu yindlu yabucala enegadi enkulu. Le ndlu ibonisa isitayile esidala saseDalmatian. Izinto zesintu ezifana namatye e-Dalmatian kunye namaplanga zazisetyenziswa ekwakhiweni ukuze kuvuselelwe iDalmatia kangangoko kunokwenzeka. Kule ndlu kukho iyadi enkulu enezityalo ezininzi eziluhlaza nezihonjisiweyo zemozulu yaseDalmatian.
Sikwiikhilomitha eziyi-16 ukusuka embindini wesixeko sase Řibenik naseDrniš, ekwisiphelo somlambo iKrka kwaye ikumgama weekhilomitha eziyi-7 kuphela ukusuka kumnyango omkhulu oya kwiKrka National Park.
Indawo yethu yokuhlala ibekwe kwindawo ethe cwaka ejikelezwe yindalo ibe loo nto yenza undwendwe luphumle kamnandi luze luphumle. Iindwendwe ziyakwazi ukungena kwindawo yazo yokungena ibe ziqinisekisiwe ukuba ziyimfihlo.
4.77 · Izimvo eziyi-137
Le ndlu ifumaneka kwilali encinci yaseDalmatian ecaleni komlambo iKrka. Iindawo ezikufutshane zithi cwaka kwaye zikhuselekile. Kukho iikhefi neevenkile zokutyela eziliqela kufutshane nelali. Asikho kude nendawo ekungenwa kuyo kwiKrka National Park. Yimizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 ngemoto ukuya kumbindi wesixeko sase Řibenik, eDrniš naseSkradin, kwaye malunga neyure ngemoto ukuya eSplitar, eZadar nasePlitvice Lakes.
Umbuki zindwendwe ngu- Zvjezdana
Volim šetnje prirodom, čitanje dobrih knjiga i provoditi vrijeme s meni dragim osobama. Raduje me upoznavanje novih ljudi i druženje s njima.
Ndinika iindwendwe indawo, kodwa ndifumaneka nanini na ukuba undwendwe ludinga nantoni na. Ukuba undwendwe lufuna nayiphi na inkcazelo okanye amacebiso, okanye naluphi na olunye uncedo, lunokuqhakamshelana nathi nanini na.